“Raharaha kidnapping”: vehivavy roa sy jiolahy iray nidoboka am-ponja | NewsMada
Nidoboka am-ponja eny Antanimora, omaly, rehefa avy natolotra ny fampanoavana eo anivon’ny sampana miady amin’ny kolikoly (Pac), 67 ha, ireo olona voarohirohy ho tompon’antoka amin’ny “Raharaha fakana an-keriny teratany karana”…
Nivoaka ny didy taorian’izay ka naiditra vonjimaika am-ponja ny telo amin’ireo voarohirohy (vehivavy roa sy lehilahy iray) raha nahazo fahafahana vonjimaika kosa ny vehivavy iray. Ny lehilahy iray farany kosa, mbola misy fanadihadiana hatao ka averina hiakatra fampanoavana anio indray, araka ny fanazavan’ny kaomandin’ny sampam-pikarohana heloka bevava eo anivon’ny zandarimariam-pirenena, ny Kly Ravelomanana Tahina. Ankoatra ny raharaha fakana an-keriny, antontan-taratasin’ady maromaro ny anenjehana ireto jiolahy ireto. Tsiahivina fa ao anatina tambajotran-jiolahy mpaka an-keriny ireto jiolahy tratran’ny zandary ireto izay tarihin-dRagodongodona (maty voatifitra ny 10 janoary teo raha hihazo an’i Manjakandriana hanoro ny toerana misy ireo namany ka nanohitra ireo zandary nitondra azy). Naka an-keriny an’i Navaze Veldjee, mpandraharaha tompon’ny Vel’Optic teny Soavimbahoaka, ireto tambajotran-jiolahy ireto ny tapaky ny volana desambra 2019. Nanao izay ho afany ny zandary tamin’ny fikarohana ireo tompon’antoka amin’ity fakana an-keriny ity ka nahitam-bokany izany ny 7 janoary 2020 teo satria jiolahy roa indray voasambotra teny Ambohimangakely sy teny Ankadimbahoaka. Tompon’antoka tamin’izany ry Ragodongodona, tanan-kavanan-dry Lama sy ry Djaffar, raindahiny amin’ny fakana an-keriny teto an-dRenivohitra nanomboka ny taona 1998. Tohivakana hatrany ny fisamborana nataon’ny zandary ka noraisim-potsiny koa ireo vehivavy mpiray tsikombakomba amin’ireo jiolahy. Efa samy manana ny andraikitr’asany avy ireo vehivavy ary tsy afa-niala amin’izao raharaha izao noho ny fisian’ireo “puce”-na telefaonina marobe misoratra amin’ny anaran’olona samihafa, araka ny fanazavan’ny zandary hatrany.
Olona maromaro mbola karohin’ny zandary…
Nanamafy hatrany ny eo anivon’ny sampana fikarohana heloka bevava fa mitohy ny fikarohana ireo olon-dratsy mpiray tsikombakomba sy ao anatin’ireto tambajotrana mpanao “kidnapping” ireto. Raha ny antontanisa nomen’ny eo anivon’ny zandarimaria misahana ity raharaha ity hatrany, mahatratra 38 ny isan’ireo mpaka an-keriny efa voasambotra hatrany amin’ny taona 2017, ny 2018 sy ny 2019. Nohamafisin’ny zandary hatrany fa ekipa iray tarika amin-dry Djaffar sy i Lama ry zalahy ireto. Ho an’i Lama manokana, nampalaza azy ny “Raharaha fakana an-keriny” nanomboka ny taona 1998 niaraka tamin-dry Mahandry. Maro ireo teratany karana mpandraharaha efa nitondra faisana tamin’ireto andian-jiolahy ireto. “Efa 20 taona mahery aty aoriana, mbola miriaria any ihany ry Lama ary ahahenoana ny anarany hatrany ny raharaha fakana an-keriny miseholany eto an-dTenivohitra”, hoy ny fanazavan’ny Kly Ravelomanana Tahina. I Navaze Veldjee, araka izany, no mpandraharaha nalain’ireto jiolahy ireto farany ny taon-dasa teo izay nahazoan’izy ireo lelavola mitentina 500 tapitrisa Ar niampy vola vahiny hafa. Malaza ihany koa ny fisian’ny trano “Villa” iray ao Nanisana fametrahan’izy ireo ny olona alaina an-keriny ary efa misy mpikarama manokana ny fikarakarana (fahandroana ny sakafony) ilay teratany vahiny alaina an-keriny mandritra ny fotoana ihazonana azy ireo mandra-pahazoan’ireo jiolahy ny vola takalonaina.
Harinandrianina Zarinah: hanitatra ny taranja ao anatin’ny CNSE 05/06/2020
Barea de Madagascar: be karama indrindra i Abel Anicet 05/06/2020
Taona 2020 – Tantara foronina: hamoaka ny boky “Vainafo an-doha” i E.R.Randriamamonjy 05/06/2020
Literatiora – Martelle Nath: hitondra “Faka miarina” aorian’ny fihibohana i Martelle Nath 05/06/2020